Agromart | Agricultural Marketplace Nepal मुटु रोग लागेमा के खाने ? कसरी बच्ने ? – Agromart
मुटु रोग लागेमा के खाने ? कसरी बच्ने ?
जाडो मौसममा मुटु रोगीले स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । चिसोका कारण प्रेसर बढ्ने तथा मुटुलाई बढी भार पर्ने हुनाले हर्टएट्याकको सम्भावना वृद्धि हुन्छ । रुघाखोकीजस्ता संक्रमणका कारण फोक्सो हुँदै मुटुमा समेत असर पर्छ ।
मुटु रोगको कारण
मधुमेह तथा रक्तचाप नियन्त्रण नभए ।
रगतमा चिल्लोको मात्रा अधिक भए ।
छाती दुख्ने, कतिपय अवस्थामा ग्यास्ट्रिकका कारण पनि छाती दुख्छ । मुटु रोग हुँदा भने छाती दुख्दा औंलाले देखाउन सकिँदैन । पूरै हत्केलाभरि दुख्छ, देब्रे तथा दाहिने दुवैतिरको छाती दुख्छ भने सँगै ढाड पनि दुख्छ । पीडासँगै चिटचिट पसिना आउने तथा वाकवाकी लाग्ने हुन्छ । १–२ महिनाअघिदेखि हिँड्दा छाती दुखे ध्यान दिनुपर्छ । छिटो–छिटो हिँड्दा, उकालो–ओरालो गर्दा छाती गह्रुंगो हुनु पनि मुटु रोगको लक्षण हुन सक्छ । यसैगरी मधुमेह तथा उच्चरक्तचापका बिरामीलाई पनि मुटु रोग हुने सम्भावना हुन्छ । सबै मधुमेहका रोगीलाई छाती नदुख्नसक्छ । अत्यधिक थकाइ लाग्ने तथा अचानक बेहोस हुने लक्षण पनि देखिनसक्छ ।
ताजा तरकारी, फलफूल, बदाम, काजी बदाम, ओखर, पेस्ता आदि ।
मुटु रोगीलाई हर्टएट्याक हुने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । उमेर वृद्धिसँगै पुरुषमा हर्टएट्याकको जोखिम बढ्छ । महिलामा भने मेनोपज (नछुने सुकेपछि) मुटु रोगको सम्भावना वृद्धि हुन्छ । मधुमेह तथा रक्तचाप नियन्त्रणमा राखे मुटु रोगबाट जोगिन सकिन्छ । यसैगरी कोलस्ट्रोल पनि नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । स्याचुरेटेड फ्याटयुक्त नौनी, घिउ, बटर, चीज आदि सेवन गर्नुहुँदैन ।
अण्डाको पहेंलो भाग हप्तामा २–३ पटक मात्र खानुपर्छ । तारेका खानेकुरा तथा जंकफुड आदि सेवन नगरे मुटु रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ । धूम्रपान गर्नुहुँदैन भने नियमित हल्का व्यायाम तथा ४५ मिनेटदेखि १ घन्टासम्म हिँडडुल गर्नुपर्छ । तौल नियन्त्रणमा राखे पक्षाघात तथा हृदयाघात दुवैबाट जोगिन सकिन्छ ।
डा. सुजीव राजभण्डारी
सिनियर कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिस्ट तथा इलेक्ट्रोफिजियोलोजिस्ट
सहिद गंगालाल राष्ट्रिय अस्पताल, बाँसबारी